जसले हिम्मत हार्न जानेकै छैन : RajdhaniDaily.com
Homeसौजन्यजसले हिम्मत हार्न जानेकै छैन
ललितपुर महालक्ष्मीथान–८ लुभु पुग्दा खेतबारीमै व्यस्त थिए, अमृत विक । कृषिलाई सम्भावना ठान्नेमध्ये एक हुन्, दाङ रक्षाचौरका उनी । कृषि गरेर ऋणमा डुबे तर कहिल्यै हतास भएनन् । ‘असफलता नै सफलताको प्रतीक हो’ भन्ने ठान लिएर उनी अघि बढिरहे । यही धैर्यताकै कारण अमृत आज यो स्थानसम्म आइपुगेका हुन् ।
‘गर्न धेरै बाँकी छन्,’ भन्छन्, ‘हिम्मत भने कहिल्यै हार्नु हुँदैन ।’
अब लागौं, २०६४ सालतिर । ती दिन अमृत घरनजिकै प्याज खेती गर्थे । लगत्तै २०६५ मा बर्दिया आए ।
‘बर्दिया फर्केपछि भने डटेरै कृषिकर्मतिर लाग्ने निधोमा पुगें,’ उनी सम्झिन्छन्, ‘तर उचित बजार नपाएपछि नराम्ररी ऋणमा डुबें ।’ त्यतिखेरको ११ लाख चानचुने रकम थिएन । तर, अमृतले हिम्मत हारेनन् । एक मन उनलाई ग्लानी पनि भयो, ‘कतै मैले बुबाआमाले कमाएको सम्पत्ति खेरै त फालिनँ ?’
त्यसपछि के भयो त ?
‘काठमाडौं आएँ, ममा विदेश जानुपर्ने दबाब पनि थियो, तर मानिनँ,’ उनी ती दिन सम्झन्छन्, ‘केही गरेरै देखाउँछु भन्ने हिम्मत थियो, अहिले पनि छ, जुन मैले कहिल्यै मर्न दिएको छैन ।’
२०६६ सालमा काठमाडौं छिरेका अमृत १४ वर्षदेखि कृषि पेशामा निरन्तर समर्पित छन्् । झन्डै तीन वर्ष टीकाथलीमा ‘पार्टनरसीप’मा उनले १६ रोपनी जग्गामा कृषि खेती सुरु गरे । पार्टनरकै सहयोगमा लामाटारमा ४० रोपनी जग्गामा कृषि खेतीमै बिताए ।
‘विस्तारै राम्रो हुँदै गयो,’ केही क्षणअघि निन्यारो देखिएका अमृत एकाएक उत्साहपूर्वक बोल्न थाले, ‘काम गर्दै जाँदा अनुभव पनि बढ्दै गयो, जसका कारण सजिलो हुन थाल्यो ।’
पाँच वर्षदेखि महालक्ष्मी नगरपालिकाको ६ रोपनी जग्गामा किसानीमा व्यस्त छन््, अमृत । मुख्यवालीका रूपमा उनले गोलभेंडा र सहायक वालीका रूपमा काउली, धनियाँ, गाँजर, बन्दा, फुलगोबी खेती गर्दै आएका छन्् ।
‘घरको ऋण तिरिसकें, वार्षिक १६ लाखबराबर कारोबार हुन्छ,’ भन्छन्, ‘जग्गा भाडा, कामदार, सिंचाइ, मल सबै कटाएर वार्षिक पाँच देखि सात लाख आम्दानी हुनेगर्छ ।’ उनको परिवारमा छोराबुहारी, छोरी र श्रीमती छन्् ।
कृषिबाहेक अरु सोच्नै नभ्याएका अमृत सीपसँगै ज्ञान पनि हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । कृषिबारे उनले थुप्रै तालिमसमेत लिएका छन् ।
हाल, सामुदायिक कृषि सहायक छन्, अमृत । ‘हाम्रो कृषि फर्ममा दोलखा, सिन्धुली, काठमाडौंलगायत स्थानबाट प्रशिक्षणका लागि आउँछन्,’ उत्पादनलाई उन्नत बनाउने विषयका प्रशिक्षकसमेत रहेका अमृत भन्छन्, ‘प्रत्येक वर्ष २०÷२० जनालाई शिक्षा मन्त्रालयको व्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम अभिवृद्धि परियोजना (इभेन्ट २)को सहयोगमा तालिम दिइने गरिएको छ ।’
हुन त, अमृतको परिचय ‘कृषक’कै रूपमा भने खुम्चिएको छैन । उनी राजनीतिमा समेत दख्खल राख्थे । ‘राजनीति समाज सेवामात्रै होइन, कृषि उत्पादनसँग पनि जोडिनुपर्ने’ धारणा उनको छ ।
२०६४ सालमा दाङ क्षेत्र ५ बाट जनमोर्चा नेपालका तर्फबाट संविधान सभा सदस्यमा टिकटसमेत पाए, उनले । जनमोर्चा लुम्बिनी क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य हुँदै तत्कालीन नेकपा माओवादी मातृका यादव समूह केन्द्रीय सदस्यसम्म भए, अमृत ।
‘मातृकाजी प्रचण्डतिर गएपछि कति यताउता गर्ने ? जनताको आशा पनि पूरा हुन सकेन,’ लामो सास तान्दै अमृत थप्छन्, ‘त्यसपछि कृषि सम्भावना बोकेको क्षेत्र भएकाले आफ्नै माटोमा खेल्ने विकल्प रोज्न पुगें ।’ कृषि समूह र सहकारीमार्फत काम गर्दै आएका उनी अहिले स्वतन्त्र राजनीतिमा रुचि पाल्छन् ।
२०७५ सालमा ४४ वर्षको उमेरमा एसईई उत्तीर्ण गरेका अमृत भन्छन््, ‘कृषिसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति कृषकमैत्री छैन । प्रत्येक किसानलाई ९० प्रतिशत अनुदान दिने हो भने केही हद राहत मिल्थ्यो ।’
उनलाई एउटै कुरा खट्किरहन्छ, बिचौलिया । ‘बिचौलिया’कै कारण समस्या हुने गरेको उनको अनुभव छ । ‘कृषि पेशा सुरु गर्दा के गर्ने कसरी गर्ने ? भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ, रोग किराको ज्ञान हुन अझ जरुरी छ,’ उनको सुझाव छ, ‘त्यसैले अध्ययन गरेर मात्रै यो क्षेत्रमा लाग्न जरुरी छ ।’
प्रशान्त वली - July 29, 2021